OTU ESI EWEPU EBE OZO NA EXCEL - EXCEL - 2019
Wepu oghere ndị ọzọ na Microsoft Excel
Oghere ndị ọzọ na ederede adịghị agba akwụkwọ ọ bụla. Karịsịa, ọ dịghị mkpa na ha ga-ahapụ ha na tebụl ndị a na-enye maka nlekọta ma ọ bụ ọha na eze. Ma ọ bụrụgodị na ị ga-eji data naanị maka ebumnuche nke onwe gị, ebe ndị ọzọ na-enye aka na mmụba nke ederede ahụ, nke bụ ihe na-adịghị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụnọ nke ihe ndị ahụ na-enweghị isi na-eme ka o sie ike ịchọ faịlụ ahụ, iji nzacha, iji nhazi na ngwaọrụ ndị ọzọ. Ka anyị chọpụta otú ị ga - esi chọta ngwa ngwa ma wepu ha.
Ihe omumu: Wepu nnukwu oghere na Microsoft Word
Gap ngwa ngwa iwepụ
Ozugbo ahụ, aghaghị m ịsị na oghere na Excel nwere ike ịdị iche iche. Ndị a nwere ike ịbụ oghere dị n'etiti okwu, oghere na mmalite nke uru na n'ikpeazụ, ndịichewa n'etiti nọmba nke okwu ọnụọgụ, wdg. N'ihi ya, algorithm maka mkpochapu ha n'okwu ndị a dị iche.
Nzọụkwụ 1: Jiri Ngwá Ọrụ Ndozi
Ngwá ọrụ ahụ bụ nnukwu ọrụ nke dochie oghere abụọ n'etiti okwu na ndị otu na Excel "Dochie".
Ịbụ na taabụ "Home", pịa bọtịnụ "Chọta ma mata"nke dị na ngwaike ngwaọrụ Na-edezi na teepu. Na ndepụta ndapụta, họrọ ihe "Dochie". I nwekwara ike kari nke omume ndị a dị n'elu pịa ụdị ụzọ keyboard Ctrl + H.
Na nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị ahụ, windo "Chọta na Dochie" mepee na tab "Dochie". N'ọhịa "Chọta" setịpụ cursor ma pịa bọtịnụ abụọ Spacebar na keyboard. N'ọhịa "Dochie ya na" tinye otu ohere. Wee pịa bọtịnụ ahụ "Dochie Nile".
Ihe omume ahụ na-anọchi anya oghere abụọ na otu. Mgbe nke ahụ gasịrị, windo na-egosi na akụkọ gbasara ọrụ ahụ. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Mgbe ahụ window ahụ gosipụtara ọzọ. "Chọta ma dochie". Anyị na-eme na window a kpọmkwem otu omume ahụ dịka akọwapụtara na paragraf nke abụọ nke ntụziaka a ruo mgbe ozi gosipụtara na achọtaghi data achọrọ.
Ya mere, anyi wepuru ebe ozo abuo abuo n'etiti okwu di na akwukwo.
Ihe omumu: Ihe Ntughari Ụdị Excel
Usoro 2: wepụ oghere n'etiti nọmba
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere oghere n'etiti nọmba dị na nọmba. Nke a abughi mmeghe, nani maka nlele anya nke oke onu ogugu bu ihe odide a di nma. Ma, nke a adịghị anya mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na enweghị usoro a na-akpọ cell, ntinye nke onyewapụ nwere ike imetụta ezi nhazi nke usoro ahụ. Ya mere, okwu nke iwepụ ndị dị otú ahụ dị ngwa ngwa. Enwere ike ịrụ ọrụ a site na iji otu ngwá ọrụ ahụ. "Chọta ma dochie".
Họrọ kọlụm ma ọ bụ ebe ị chọrọ iwepụ ndị na-emegharị ọnụ n'etiti nọmba. Oge a dị ezigbo mkpa, n'ihi na ọ bụrụ na ịhọrọghị nhọrọ ahụ, ngwá ọrụ ahụ ga-ewepu oghere nile site na akwụkwọ ahụ, gụnyere n'etiti okwu, ya bụ, ebe ha dị mkpa n'ezie. Ọzọkwa, dị ka ọ dị na mbụ, pịa bọtịnụ "Chọta ma mata" na ngọngọ nke ngwaọrụ Na-edezi na rịbọn na tab "Home". Na ntinye nhọrọ, họrọ ihe "Dochie".
Window amalite ọzọ. "Chọta ma dochie" na taabụ "Dochie". Ma oge a anyị ga-atụnye ụkpụrụ dịtụ iche na ubi. N'ọhịa "Chọta" tinye otu ohere na ubi "Dochie ya na" anyị na-ahapụ n'ozuzu efu. Iji jide n'aka na e nweghị ohere ọ bụla na mpaghara a, debe ya cursor ma jigide bọtịnụ azụ (n'ụdị akụ) na keyboard. Jide bọtịnụ ahụ ruo mgbe onye ọbụla na-ama aka n'akụkụ aka ekpe nke ubi. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa bọtịnụ ahụ "Dochie Nile".
Usoro ihe omume ahụ ga-arụ ọrụ nke iwepu oghere n'etiti nọmba. Dịka na usoro gara aga, iji jide n'aka na arụ ọrụ ahụ ezuola, anyị na-emegharị ugboro ugboro ruo mgbe ozi ahụ gosiri na achọtaghi uru achọrọ.
A ga-ewepụ nkewa n'etiti nọmba ahụ, a ga-amalitekwa ịgbakọ usoro ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Nzọụkwụ 3: ehichapụ ihe dị iche n'etiti ọnụọgụ site na nhazi
Ma, enwere ọnọdụ mgbe ị na-ahụ nke ọma na na mkpụrụ akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-ekewapụ na nọmba site na oghere, nchọpụta ahụ adịghị enyekwa nsonaazụ. Nke a na-enye echiche na na nke a, a na-ekewa ya site na nhazi. Nhọrọ a nke oghere adịghị emetụta mmezi nke ngosipụta nke usoro ahụ, mana n'otu oge ahụ, ụfọdụ ndị ọrụ kwenyere na ọ bụrụ na ọghị ya, tebụl ga-adị mma. Ka anyị lelee otu esi ewepụ nhọrọ nkewa dị otú ahụ.
Ebe ọ bụ na a na-eji oghere ndị a na-akpọpụta usoro, naanị otu ngwa ndị ahụ nwere ike wepụ ha.
Họrọ ọnụọgụ nke nọmba na separators. Pịa na nhọrọ na bọtịnụ òké aka. Na menu na-egosi, họrọ ihe "Hazie mkpụrụ ndụ ...".
Nhazi usoro malitere. Gaa taabụ "Ọnụ ọgụgụ", ma ọ bụrụ na oghere mere ebe ọzọ. Ọ bụrụ na esetịpụrụ nkewa site na iji nhazi, mgbe ahụ na nhazi nke oke "Ụdị Nọmba" nhọrọ ga-arụnyere "Nhọrọ". Na akụkụ aka nri nke windo ahụ bụ ntọala ziri ezi nke usoro a. Nso nso "Òtù ndị na-eme mkpọtụ ()" naanị ị chọrọ ịchọta ya. Mgbe ahụ, ka mgbanwe wee gbanwee, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Ihuenyo nhazi ahụ mechie, na nkewa n'etiti nọmba nke ọnụọgụgụ na ọnụọgụ nhọrọ ga-ewepụ.
Ihe omumu: Nhazi nhazi Excel
Usoro 4: Wepụ oghere na ọrụ ahụ
Ngwaọrụ "Chọta ma dochie" Akwa maka iwepụ ohere dị n'etiti ihe odide. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ọ dị ha mkpa ka ewepụ ha ná mmalite ma ọ bụ na njedebe nke okwu? Na nke a, ọrụ ahụ sitere na ìgwè ndị ọrụ. Ebu.
Ọrụ a na-ewepu oghere ọ bụla site na ederede nke nhọrọ ahọrọ, ma e wezụga maka oghere dị n'etiti okwu. Nke ahụ bụ, ọ nwere ike idozi nsogbu ahụ na oghere na mmalite nke okwu ahụ n'ime cell, na njedebe nke okwu ahụ, nakwa iji wepụ oghere abụọ.
Ngwunye nke onye ọrụ a dị nnọọ mfe ma nwee naanị otu esemokwu:
= TRIMS (ederede)
Dị ka arụmụka "Ederede" nwere ike ime ihe dị ka okwu ederede n'onwe ya, ma ọ bụ dịka akaebe na cell nke ọ dị. Maka ikpe anyị, nanị nhọrọ ikpeazụ ga-atụle.
Họta cell nke dịdebere na kọlụm ma ọ bụ n'ahịrị ebe a ga-ewepụ ohere. Pịa bọtịnụ "Tinye ọrụ"nke dị n'aka ekpe nke usoro mmanya.
Ọkachamara Ọmalitere amalite. Na ụdị "Ndepụta ndepụta nke mkpụrụ akwụkwọ" ma ọ bụ "Ederede" achọ ihe "SZHPROBELY". Họrọ ya wee pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Ikwupụta esemokwu arụ ọrụ na-emepe. N'ụzọ dị mwute, ọrụ a anaghị enye anyị ohere niile dị anyị mkpa dịka arụmụka. Ya mere, anyị na-etinye cursor na arụmụka arụmụka, wee họrọ sel nke mbụ dị na nke anyị na-arụ ọrụ. Mgbe adreesị ụlọ ahụ gosipụtara n'ọhịa, pịa bọtịnụ ahụ "OK".
Dịka ị nwere ike ịhụ, ọdịnaya nke cell ahụ na-egosipụta na mpaghara ebe ọrụ ahụ dị, mana na enweghi oghere ọzọ. Anyị ewepụla oghere naanị otu ihe dị iche. Iji wepu ha na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ, ọ dị gị mkpa imepụta ihe yiri ya na mkpụrụ ndụ ndị ọzọ. N'ezie, ọ ga-ekwe omume ịrụ ọrụ dị iche iche na cell ọ bụla, mana nke a nwere ike iwe oge dị ukwuu, karịsịa ma ọ bụrụ na ọnụnọ dị oke. E nwere ụzọ isi mee ngwa ngwa ngwa. Debe cursor na ala aka nri nke cell, nke ugbua nwere usoro. A na-agbanwe cursor ahụ ka ọ bụrụ obere obe. A na-akpọ ya akara akara. Jidea bọtịnụ òké aka ekpe ma dọrọ ihe juputara na njiri nke ịchọrọ iwepụ oghere.
Dịka ị pụrụ ịhụ, mgbe omume ndị a gasịrị, e guzobere ebe ọhụrụ jupụtara na ya, bụ ebe ihe niile dị na isi iyi ahụ dị, ma enweghi ohere ọ bụla. Ugbu a, anyị na-eche ọrụ nke dochie ụkpụrụ mbụ dị iche iche na data a gbanwere. Ọ bụrụ na anyị na-ebipụta otu nchịkọta dị mfe, mgbe ahụ, a ga-edegharị usoro ahụ, nke pụtara na ntinye ga-eme na ezighi ezi. Ya mere, ọ dị anyị mkpa ịmepụta otu ụkpụrụ.
Họrọ otu ihe na ụkpụrụ ndị a gbanwere. Anyị pịa bọtịnụ ahụ "Detuo"dị na rịbọn ahụ na tab "Home" n'ime otu ngwaọrụ "Mbadamba". Dị ka ihe ọzọ, ịnwere ike ịpị ụzọ dị mkpirikpi mgbe nhọrọ Ctrl + C.
Họrọ nhazi data mbu. Pịa na nhọrọ na bọtịnụ òké aka. Na nchịkọta nhọrọ na mpaghara ahụ "Nhọrọ Ntinye" họrọ ihe "Ụkpụrụ". A na-egosi ya dị ka eserese dị na ọnụ ọgụgụ n'ime.
Dịka ị nwere ike ịhụ, mgbe omume ndị a dị n'elu, a na-eji akara data na-enweghị ha dochie ọnụahịa na ohere ndị ọzọ. Nke ahụ bụ, arụ ọrụ ahụ agwụla. Ugbu a, ị nwere ike ihichapụ mpaghara ebe a na-eji maka mgbanwe. Họrọ ọtụtụ mkpụrụ ndụ nke nwere usoro Ebu. Anyị na-eji bọtịnụ òké aka pịa ya. Na nchịkọta nhọrọ, họrọ ihe "Ọdịnaya doro anya".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ewepụ ihe ndekọ data ahụ na mpempe akwụkwọ ahụ. Ọ bụrụ na e nwere ọkwa ndị ọzọ na tebụl nke nwere oghere ndị ọzọ, mgbe ahụ ịkwesịrị ịga n'ihu ha na-eji kpọmkwem otu algọridim dịka akọwara n'elu.
Ihe omumu: Ọkachamara Ọrụ Excel
Ihe omumu: Otu esi eme ka ezughị oke na Excel
Dịka ị pụrụ ịhụ, e nwere ọtụtụ ụzọ iji wepụ ohere ndị ọzọ na Excel. Ma ihe ndị a niile na-emejuputa na naanị ngwaọrụ abụọ - windo "Chọta ma dochie" na onye ọrụ Ebu. N'okwu dị iche, i nwekwara ike iji usoro. Enweghị ụzọ zuru ụwa ọnụ nke ga-akacha mma iji mee ihe n'ọnọdụ ọ bụla. N'otu oge, ọ ga-adị mma iji otu nhọrọ, na nke abụọ - ọzọ, wdg. Dịka ọmụmaatụ, iwepụ oghere abụọ n'etiti okwu nwere ike ime site na ngwaọrụ. "Chọta ma dochie", mana naanị ọrụ nwere ike iwepụ oghere na mmalite na cell Ebu. Ya mere, onye ọrụ ahụ aghaghị ịme mkpebi na ngwa nke otu usoro ahụ n'onwe ya, na-echebara ọnọdụ ahụ echiche.